छोटा, मिठा तथा जीवन्त निवन्धहरू | www.samakalinsahitya.com
छोटा, मिठा तथा जीवन्त निवन्धहरू
“ सलाम छ !
सार्थक जीवनको पक्षमा रगत बगाउनेहरूलाई !
सलाम छ !
रगतको मूल्य सार्थक जीवनमा खाज्नेहरूलाई !
माटो रगतले सिञ्चित हुँदा, यथार्थको पुनरुत्पादन भएका छन् क्यानभासमा र क्यानभासको पुनरुत्पादनमा रक्तरन्जित भएका छन् टेलिभिजनको स्किन पनि । म आफै पनि घेरिएको छु, विद्रोही कलाकारहरूझै प्रश्नको फणाले । अहिले मलाई लागिरहेको छ, कलाकारहरूका आफ्ना सिर्जनाबाट रगत र बलिदानको सार्थकता खोजेझैँ तिनै कलाको पुनरुत्पादनबाट हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई रगत र बलिदानको मूल्य र सार्थकता खोज्ने बनाउँन सक्यौँ ?”
यी हरफहरू मैले टङ्क उप्रेतीको नविन कृति “खण्डित सपनाको गीत”निबन्धसङ्ग्रहबाट लिएको हुँ । म यतिबेला यसै कृतिका बारेमा केही कुराहरू खोतल्ने प्रयासमा लागेको छु । पुस्तक पढ्दै जाँदा निकै भावुक पनि बनेँ म । मानवीय जीवनका अनेकन पीडाहरू उल्लेख भएका छन् यहाँ । उनले यात्रा गर्दाका होस अथवा काम गर्दाका अनुभवहरू हुन्, निबन्ध मार्फत व्यक्त गरेका छन् । जम्मा एक्काइस वटा निवन्धहरू रहेका यस पुस्तकलाई प्रतिष्ठित प्रकाशक रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशनमा ल्याएको छ । पेशाले सञ्चारकर्मी र कुशल कवि पनि हुन टङ्क । नेपाली साहित्यमा आफ्नो उपस्थिति जनाई सकेका उनका कविताहरू सुन्दरवान्कीका हुनुका साथै जीवन र जगतसंग नजिक रहेका छन् । उनका कविताहरूमा मानवियसंवेदनाहरू छरपष्ट छरिएका छन् । यसअघि उनको चार ओटा कवितासङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् । उनी एउटा प्रतिभाशाली कविका रुपमा दर्ज भइसकेका कुशल कवि हुन् ।
“खण्डित सपनाको गीत”भित्रका निवन्धहरू सामाजिक सरोकारसंग प्रत्यक्ष लगाव रहेका छन् । यी निवन्धहरूले प्रत्यक्षरुपमा देखापरेका विविध दुरिलाई नजिक ल्याउनको लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्नेछन । केही निवन्धहरू यात्राका सेरोफेरोमा लेखिएका र केही निवन्धहरू आत्मकथ्यका कुराहरूमा केन्द्रित रहेका छन् । समग्र निवन्धहरू सामाजका यथार्थपरक विषयहरूमा केन्द्रित भएका पाइन्छन् । एउटा प्रतिनिधि पात्र नन्दलालको बारेमा लेखिएको “नन्दलालको युग” शिर्षकको निवन्धले यथार्थबोध गराएको छ । हाल निकै लोकप्रिय बनेको फेसबुक मार्फत हराएका साथीहरू भेटिएका छन् यो सत्य हो । यसरी भेटिएका मान्छेहरूको बारेमा लेखिएका निवन्धहरूलाई टङ्कले फेसबुक बाहिर पनि ठूलै जमात छ है भने खवरदारी गरेका छन् “फेसबुक बाहिर” शिर्षक मार्फत । हेरौं एक अंश ः–“मेट्रोपोलिटन सेन्टर”तिर हराएका केही मानिसहरूको सञ्जालमा आबद्ध भएपछि “बाहिर छ ठूलै नेपाल ।” भनी निश्कर्ष निकाल्नेहरूले पहिचानविहिन साधारण मानिसहरूको फेसबुक बाहिरको वास्तविक संसारलाई साँचो अर्थमा कहिल्यै बुझ्न सक्लान् त ? यो गम्भिर प्रश्नले मलाई अहिले पनि पीडित बनाएको छ ।” हो यस्तै संवेदनाहरूले भरिएका छन् उनका निवन्धहरू । उनी कवि भएकै नाताले कवितात्मक बिम्बहरु प्रयोग हुनु नौलो कुरा होइन, तापनि उनका निवन्धहरु सरल छन्, यथार्थ छन् साथै मानविय संवेदनाहरुले भरिएका छन् । पढ्दै जाँदा रोमाञ्चित एवं उत्सुकता जागेर आउँछ । छोटा मिठा उनका निवन्धहरूले एउटा वास्तविक धरातलमा पु¥याउछ । मान्छे मान्छे विच वढ्दै गएको दुरीलाई नजिक ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनी यात्राका दौरानमा जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँका वास्तविक चित्रणलाई उर्ताने गर्छन, क्यामराले कैद गरिएका सग्ला चित्रहरु जस्तै । अनि लेख्छन् मानविय यथार्थहरु जहाँ राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेर पनि आफ्ना भाग्य आफै कोरिरहेका पौरखी हातहरुका कथा । यस्तै कथाका पात्रहरूलाई भेट्छन् तोपलाङ्मा । तोपलाङ्का जीवित स्तम्भको रुपमा पाउछन् उनलाई । सत्तरी शिशिर पार गरेका भैरवबहादुरका अनुहारका असङ्ख्य रखाहरूमा सङ्घर्षको महाआख्यान पढ्छन् । प्रत्येक रेखाहरू समयका क्रुर कोर्राहरूबाट लेखिएका स्पष्ट देख्छन् । अभाव, विपन्नता, अन्याय, अत्याचार, राज्यको पूर्वाग्रह र वेवास्ता आदिबाट संयुक्त रूपमा सिर्जित पीडाका उदास रङ्गहरूले कोरिएका हुन् उनका अनुहारका धर्साहरू । उनको हृदयको पोखरी आफ्नै आँसुले भरिएको पाउँछन् । भैरवबहादुको हृदयका कुराहरू आफ््नै भाषामा यसरी पोख्छन्् ः–
“तोपलाङ्मा पानी पर्दा
हरियाली डढ्ने त हैन ।”
यस्तै यस्तै सुन्दर, यथार्थ तथा जीवन्त कथाहरूलाई समेटेर तयार भएको छ, “खण्डित सपनाको गीत”निबन्धसङ्ग्रह । यी निवन्धहरू एकै वसाईमा पढ्न सकिन्छ । र विविध स्वादहरूसंग रम्न सकिन्छ । समग्रमा हेर्दा टङ्कका निवन्धहरूले उनलाई एउटा स्थापित निवन्धकारको रूपमा पनि स्थापित गराउन सफल देखिन्छ । प्रस्तुत पुस्तक पठनिय साथै सङग्रहनिय पनि रहेको छ ।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : मगलबार, 12 बैशाख, 2069
नेपाली निबन्धको अब्बल कृति : ‘एक्लो परिचय’
लघुकथामा विविधता: 'अणु र पहाड'
समय–त्रासदीका प्रहारः 'ताप'
नियात्रामा नविन प्रयोग : ‘एक पटक टोकियो’
समसामयिक कविताहरुको सङ्ग्रह “मेघा”
नेपाली आख्यानको विशिष्ट कृति : 'सकस'
लघुकथा लेखन परम्परा र लघुकथा दिवस
पढ्नै पर्ने पुस्तक
अब्बल दर्जाका लघुकथाहरू
कथामा बाल मनोविज्ञान